အကောင်းဆုံး portable ဘက်ထရီ (၈) မျိုး – Internet Journal |
အကောင်းဆုံး portable ဘက်ထရီ (၈) မျိုး
May 16, 2018Comments Off on အကောင်းဆုံး portable ဘက်ထရီ (၈) မျိုး0207
External battery pack တွေဟာ အကြမ်းခံတဲ့ ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည် တစ်ခုထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ သေးငယ်ပြီး အားပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ lithium-ion ဘက်ထရီတွေဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာ gadget တွေကို အားပြန်သွင်းရာမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် USB Type A port တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။
အချို့မှာတော့ Nintendo Switch အပြင် Samsung Galaxy S9 နဲ့ Google Pixel2တို့လို Android စမတ်ဖုန်းတွေမှာ တွေ့မြင်ရတဲ့ USB Type-C အားသွင်းစံသတ်မှတ်ချက်သစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အချို့မှာတော့ ထုတ်ကုန်တွေကိုအားသွင်းဖို့အတွက် built-in USB ဒါမှမဟုတ် Lightning အားသွင်းကြိုးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအားသွင်းကြိုးကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ခေတ်မှာ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ဘက်ထရီကို သုံးစွဲသူကိုယ်တိုင် လဲလှယ်တပ်ဆင်မှု မလုပ်နိုင်တာကြောင့် external battery pack တွေက မရှိမဖြစ် မိုဘိုင်းတွဲဖက်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး portable ဘက်ထရီတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်စေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး portbale ဘက်ထရီ (၈) မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
1. Anker PowerCore 13000 Portable Phone Charger
တန်ဖိုး – ၃၄ ဒေါ်လာ
အားသာချက် – ဘက်ထရီပမာဏ များပြား၊ အရွယ်သေးငယ်ပြီး အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်။
အားနည်းချက် – အားသွင်းကြိုးမပါ
Anker PowerCore 13000 ဟာ portable ဘက်ထရီတွေမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ USB port နှစ်ခု ပါဝင်ပြီး စမတ်ဖုန်းအချို့ကို ငါးကြိမ်အထိ အားပြန်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ iPhone X ကို တစ်နာရီ ၁၅ မိနစ်အတွင်း အားအပြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘက်ထရီကို အားအပြည့်သွင်းထားတယ်ဆိုရင် MacBook ကို ၆၀% အထိ အားပြန်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
2. Jackery Bolt Battery Pack
တန်ဖိုး – ၃၆ ဒေါ်လာ
အားသာချက် – အားသွင်းကြိုးပါဝင်
အားနည်းချက် – သိပ်မလင်းတဲ့ LED မီးလုံးပါဝင်
Jakery Bolt ဟာ စွယ်စုံသုံးနိုင်တဲ့ portable ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။ Anker PowerCore 13000 ထက် အရွယ်ကြီးပြီး လေးလံတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီစာရင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး portable ဘက်ထရီအဖြစ် ရွေးချယ်မခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Anker မှာ မပါဝင်တဲ့ အားသွင်းကြိုးကို Bolt မှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Bolt ရဲ့ တစ်ဖက်မှာ Android စမတ်ဖုန်း၊ tablet ဒါမှမဟုတ် ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကို အားသွင်းဖို့အတွက် micro-USB cable တစ်ခုကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ Lightning ဒါမှမဟုတ် USB-C cable တစ်ခုကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ USB outpout တစ်ခု ပါဝင်တာကြောင့် ထုတ်ကုန်သုံးခုကို တစ်ပြိုင်နက် အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်သေးငယ်တဲ့ အပြာရောင် LED မီးလုံးပါဝင်ပေမယ့် သိပ်မလင်းပါဘူး။
Bolt ဟာ iPhone X ကို တစ်နာရီခွဲအတွင်း အားအပြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Bolt ကို အားပြန်သွင်းရင်တော့ ၅ နာရီ ကြာမြင့်ပါလိမ့်မယ်။
3. RAVPower 26800mAh PD Portable Phone Charger
တန်ဖိုး – ၈၂ ဒေါ်လာ
အားသာချက် – Nintendo Switch ဒါမှမဟုတ် laptop တစ်လုံးကို အားပြန်သွင်းနိုင်
အားနည်းချက် – အရှည် ၇ လက်မနီးပါးရှိတဲ့အတွက် အိတ်ကပ်ထဲ မထည့်နိုင်
ဒီဘက်ထရီရဲ့ ပမာဏက 26,800mAh ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ပတ်အကြာ အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Nintendo Switch ကို ၃.၅ ကြိမ် အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
အလေးချိန် တစ်ပေါင်ရှိတဲ့ RavPower မှာ USB port နှစ်ခုနဲ့ 30W Type-C output တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကို အားပြန်သွင်းဖို့အတွက် micro-USB ကြိုး ဒါမှမဟုတ် Type-C port ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Type-C port ကို ရွေးမယ်ဆိုရင် အချိန်အနည်းငယ် သက်သာပါလိမ့်မယ်။ USB-C နဲ့ဆိုရင် ၄.၅ နာရီသာ ကြာမြင့်ပြီး micro-USB cable နဲ့ဆိုရင်တော့ ၁၀ နာရီကျော် ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
4. Anker PowerCore Slim 5000 Battery Pack
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၃၀
အားသာချက် – ချောမွတ်ပြီး ပါးလျတဲ့ဒီဇိုင်း
အားနည်းချက် – အားသွင်းကြိုး မပါဝင်
Anker PowerCore Slim 5000 ဟာ ချောမွတ်ပြီး ပါးလျတဲ့ ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။ အထူက တစ်လက်မရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံသာရှိပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အရွယ်သာရှိတာကြောင့် လက်ထဲမှာ အဆင်ပြေစွာ ကိုင်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
USB port တစ်ခုပါဝင်ပြီး ဖုန်းကို နှစ်ကြိမ်အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး input နဲ့ output က2amps ဖြစ်တာကြောင့် စမတ်ဖုန်းကို တစ်နာရီလောက်အတွင်း အားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
5. Xiaomi Mi Power Bank Pro 10000mAh Portable Charger
တန်ဖိုး – ၂၇ ဒေါ်လာ
အားသာချက် – ဈေးသက်သာခြင်း
အားနည်းချက် – input အတွက် USB-C port သာပါဝင်
တကယ်လို့ ဈေးသက်သာတဲ့ ဘက်ထရီကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ Xiaomi Mi Power Bank Pro ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အထူ လက်မဝက်ခန့်သာရှိတဲ့အတွက် အိတ်ကပ်ထဲ အလွယ်တကူ ထည့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီပမာဏက 10,000mAh ပါ။ ဒါဟာ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို လေးကြိမ်ခန့် အားသွင်းဖို့ လုံလောက်တဲ့ပမာဏ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mi Power Bank မှာ Qualcomm ရဲ့ Quick Charge 3.0 ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတာကြောင့် ၃၅ မိနစ်အတွင်း ဖုန်းကို ၀ ကနေ ၈၀% အထိ အားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အလေးချိန် ၇ အောင်စသာရှိတဲ့ ဒီဘက်ထရီမှာ USB port တစ်ခုသာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကို အားပြန်သွင်းဖို့အတွက် ၃.၅ နာရီကြာမြင့်ပါတယ်။
6. mophie powerstation AC Charger
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၂၀၀
အားသာချက် – MacBook တစ်လုံးကို အားအပြည့်သွင်းနိုင်
အားနည်းချက် – ဈေးနှုန်းမြင့်မား
Mophie powerstation AC က စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ portable battery pack ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဘက်ထရီကို CES 2018 မှာ မိတ်ဆက်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလေးချိန် ၂ ပေါင်နီးပါးရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီပမာဏက 22,000mAh ဖြစ်ပြီး 100W AC output နဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် laptop ဒါမှမဟုတ် tablet တစ်လုံးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး external ဘက်ထရီတစ်လုံးအနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
30W USB-PD ပါဝင်တဲ့ USB-C port ကိုသုံးထားတာကြောင့် Nintendo Switch ဒါမှမဟုတ် iPhone X တစ်လုံးကို အလျင်အမြန် အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘက်ထရီနဲ့ iPhone X ကို ၈ ကြိမ် အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ၁၂ လက်မ MacBook ကိုတော့ နှစ်ကြိမ် အားသွင်းနိုင်ပြီး ၁၃ လက်မ MacBook Pro ကိုတော့ တစ်ကြိမ်အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
တန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၁၀၀
အားသာချက် – အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်
အားနည်းချက် – အနက်ရောင်နဲ့သာ ရရှိနိုင်
Nintendo Switch ဟာ အားသွင်းဖို့အတွက် 15V/2.6A လိုအပ်တာကြောင့် Anker PowerCore Speed 20000 PD က Switch အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘက်ထရီရဲ့ အထူက တစ်လက်မသာရှိပြီး အလေးချိန်က ၁၃ အောင်စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီရဲ့ပမာဏက 20,100mAh ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ စမတ်ဖုန်းကို ငါးကြိမ်၊ USB-C laptop ကို တစ်ကြိမ်နဲ့ tablet ကို နှစ်ကြိမ် အားပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ပမာဏ ဖြစ်ပါတယ်။
8. LifeProof LIFEACTÍV Portable Phone Charger
တန်ဖိုး – ၅၂ ဒေါ်လာ
အားသာချက် – ရေစိုဒဏ်၊ အကြမ်းဒဏ်ခံနိုင်
အားနည်းချက် – ဘက်ထရီပမာဏ ၁၀,၀၀၀ သာပါဝင်
LifeProof ရဲ့ ဒီ external battery pack ဟာ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်သလို ပြုတ်ကျတဲ့ဒဏ်နဲ့ ညစ်ပတ်ပေရေတဲ့ဒဏ်တွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ရေအနက် ၂ မီတာမှာ တစ်နာရီကြာ စိမ်ထားနိုင်ပြီး ၆ လက်မအထူရှိတဲ့ နှင်းထုထဲ ပြုတ်ကျတဲ့ဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီရဲ့ပမာဏက 10,000mAh ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက်ထရီနဲ့ စမတ်ဖုန်းကို လေးကြိမ်၊ tablet ကို တစ်ကြိမ် အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
External battery pack တှဟော အကွမျးခံတဲ့ ပလတျစတဈကိုယျထညျ တဈခုထဲမှာ ထညျ့သှငျးထားတဲ့ သေးငယျပွီး အားပွနျသှငျးနိုငျတဲ့ lithium-ion ဘကျထရီတှဖွေဈပါတယျ။ အမြားစုမှာ gadget တှကေို အားပွနျသှငျးရာမှာ အသုံးပွုဖို့အတှကျ USB Type A port တဈခု ဒါမှမဟုတျ နှဈခု ပါဝငျပါတယျ။
အခြို့မှာတော့ Nintendo Switch အပွငျ Samsung Galaxy S9 နဲ့ Google Pixel2တို့လို Android စမတျဖုနျးတှမှော တှမွေ့ငျရတဲ့ USB Type-C အားသှငျးစံသတျမှတျခကျြသဈကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ အခြို့မှာတော့ ထုတျကုနျတှကေိုအားသှငျးဖို့အတှကျ built-in USB ဒါမှမဟုတျ Lightning အားသှငျးကွိုးတှေ ပါဝငျပါတယျ။ အမြားစုကတော့ ကိုယျ့ရဲ့ဖုနျးအားသှငျးကွိုးကို အသုံးပွုဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဒီကနခေ့တျေမှာ စမတျဖုနျးတှရေဲ့ ဘကျထရီကို သုံးစှဲသူကိုယျတိုငျ လဲလှယျတပျဆငျမှု မလုပျနိုငျတာကွောငျ့ external battery pack တှကေ မရှိမဖွဈ မိုဘိုငျးတှဲဖကျပစ်စညျးတဈခု ဖွဈလာပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အကောငျးဆုံး၊ စှမျးဆောငျရညျအမွငျ့ဆုံးနဲ့ အမွနျဆုံး portable ဘကျထရီတှကေို ရှေးခယျြဝယျယူနိုငျစဖေို့အတှကျ အကောငျးဆုံး portbale ဘကျထရီ (၈) မြိုးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
တနျဖိုး – ၃၄ ဒျေါလာ
အားသာခကျြ – ဘကျထရီပမာဏ မြားပွား၊ အရှယျသေးငယျပွီး အလှယျတကူ သယျဆောငျနိုငျ။
အားနညျးခကျြ – အားသှငျးကွိုးမပါ
Anker PowerCore 13000 ဟာ portable ဘကျထရီတှမှော အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ USB port နှဈခု ပါဝငျပွီး စမတျဖုနျးအခြို့ကို ငါးကွိမျအထိ အားပွနျသှငျးနိုငျပါတယျ။ iPhone X ကို တဈနာရီ ၁၅ မိနဈအတှငျး အားအပွညျ့သှငျးနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘကျထရီကို အားအပွညျ့သှငျးထားတယျဆိုရငျ MacBook ကို ၆၀% အထိ အားပွနျသှငျးနိုငျပါတယျ။
တနျဖိုး – ၃၆ ဒျေါလာ
အားသာခကျြ – အားသှငျးကွိုးပါဝငျ
အားနညျးခကျြ – သိပျမလငျးတဲ့ LED မီးလုံးပါဝငျ
Jakery Bolt ဟာ စှယျစုံသုံးနိုငျတဲ့ portable ဘကျထရီဖွဈပါတယျ။ Anker PowerCore 13000 ထကျ အရှယျကွီးပွီး လေးလံတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီစာရငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး portable ဘကျထရီအဖွဈ ရှေးခယျြမခံရတာ ဖွဈပါတယျ။ Anker မှာ မပါဝငျတဲ့ အားသှငျးကွိုးကို Bolt မှာ ရရှိနိုငျပါတယျ။ Bolt ရဲ့ တဈဖကျမှာ Android စမတျဖုနျး၊ tablet ဒါမှမဟုတျ ကွိုးမဲ့နားကွပျကို အားသှငျးဖို့အတှကျ micro-USB cable တဈခုကို တှနေို့ငျပါတယျ။ အခွားတဈဖကျမှာတော့ Lightning ဒါမှမဟုတျ USB-C cable တဈခုကို တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ USB outpout တဈခု ပါဝငျတာကွောငျ့ ထုတျကုနျသုံးခုကို တဈပွိုငျနကျ အားသှငျးနိုငျပါတယျ။ အရှယျသေးငယျတဲ့ အပွာရောငျ LED မီးလုံးပါဝငျပမေယျ့ သိပျမလငျးပါဘူး။
Bolt ဟာ iPhone X ကို တဈနာရီခှဲအတှငျး အားအပွညျ့သှငျးပေးနိုငျပါတယျ။ Bolt ကို အားပွနျသှငျးရငျတော့ ၅ နာရီ ကွာမွငျ့ပါလိမျ့မယျ။
တနျဖိုး – ၈၂ ဒျေါလာ
အားသာခကျြ – Nintendo Switch ဒါမှမဟုတျ laptop တဈလုံးကို အားပွနျသှငျးနိုငျ
အားနညျးခကျြ – အရှညျ ရ လကျမနီးပါးရှိတဲ့အတှကျ အိတျကပျထဲ မထညျ့နိုငျ
ဒီဘကျထရီရဲ့ ပမာဏက 26,800mAh ဖွဈပါတယျ။ စမတျဖုနျးတဈလုံးကို တဈနတေ့ဈကွိမျနဲ့ တဈပတျအကွာ အားသှငျးနိုငျပါတယျ။ Nintendo Switch ကို ၃.၅ ကွိမျ အားသှငျးနိုငျပါတယျ။
အလေးခြိနျ တဈပေါငျရှိတဲ့ RavPower မှာ USB port နှဈခုနဲ့ 30W Type-C output တဈခုပါဝငျပါတယျ။ ဘကျထရီကို အားပွနျသှငျးဖို့အတှကျ micro-USB ကွိုး ဒါမှမဟုတျ Type-C port ကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ Type-C port ကို ရှေးမယျဆိုရငျ အခြိနျအနညျးငယျ သကျသာပါလိမျ့မယျ။ USB-C နဲ့ဆိုရငျ ၄.၅ နာရီသာ ကွာမွငျ့ပွီး micro-USB cable နဲ့ဆိုရငျတော့ ၁၀ နာရီကြျော ကွာမွငျ့နိုငျပါတယျ။
တနျဖိုး – ဒျေါလာ ၃၀
အားသာခကျြ – ခြောမှတျပွီး ပါးလတြဲ့ဒီဇိုငျး
အားနညျးခကျြ – အားသှငျးကွိုး မပါဝငျ
Anker PowerCore Slim 5000 ဟာ ခြောမှတျပွီး ပါးလတြဲ့ ဘကျထရီဖွဈပါတယျ။ အထူက တဈလကျမရဲ့ သုံးပုံတဈပုံသာရှိပါတယျ။ စမတျဖုနျးတဈလုံးရဲ့ အရှယျသာရှိတာကွောငျ့ လကျထဲမှာ အဆငျပွစှော ကိုငျဆောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
USB port တဈခုပါဝငျပွီး ဖုနျးကို နှဈကွိမျအားသှငျးနိုငျပါတယျ။ အမွငျ့ဆုံး input နဲ့ output က2amps ဖွဈတာကွောငျ့ စမတျဖုနျးကို တဈနာရီလောကျအတှငျး အားသှငျးပေးနိုငျပါတယျ။
တနျဖိုး – ၂၇ ဒျေါလာ
အားသာခကျြ – စြေးသကျသာခွငျး
အားနညျးခကျြ – input အတှကျ USB-C port သာပါဝငျ
တကယျလို့ စြေးသကျသာတဲ့ ဘကျထရီကို ရှာဖှနေတေယျဆိုရငျတော့ Xiaomi Mi Power Bank Pro ကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ အထူ လကျမဝကျခနျ့သာရှိတဲ့အတှကျ အိတျကပျထဲ အလှယျတကူ ထညျ့သှားနိုငျပါတယျ။ ဘကျထရီပမာဏက 10,000mAh ပါ။ ဒါဟာ စမတျဖုနျးတဈလုံးကို လေးကွိမျခနျ့ အားသှငျးဖို့ လုံလောကျတဲ့ပမာဏ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Mi Power Bank မှာ Qualcomm ရဲ့ Quick Charge 3.0 ကို ထောကျပံ့ပေးထားတာကွောငျ့ ၃၅ မိနဈအတှငျး ဖုနျးကို ၀ ကနေ ၈၀% အထိ အားသှငျးပေးနိုငျပါတယျ။
အလေးခြိနျ ရ အောငျစသာရှိတဲ့ ဒီဘကျထရီမှာ USB port တဈခုသာ ပါဝငျပါတယျ။ ဘကျထရီကို အားပွနျသှငျးဖို့အတှကျ ၃.၅ နာရီကွာမွငျ့ပါတယျ။
တနျဖိုး – ဒျေါလာ ၂၀၀
အားသာခကျြ – MacBook တဈလုံးကို အားအပွညျ့သှငျးနိုငျ
အားနညျးခကျြ – စြေးနှုနျးမွငျ့မား
Mophie powerstation AC က စှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားတဲ့ portable battery pack ဖွဈပါတယျ။ ဒီ ဘကျထရီကို CES 2018 မှာ မိတျဆကျကွညောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အလေးခြိနျ ၂ ပေါငျနီးပါးရှိပါတယျ။ ဘကျထရီပမာဏက 22,000mAh ဖွဈပွီး 100W AC output နဲ့ သုံးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ laptop ဒါမှမဟုတျ tablet တဈလုံးအတှကျ အသငျ့တျောဆုံး external ဘကျထရီတဈလုံးအနနေဲ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
30W USB-PD ပါဝငျတဲ့ USB-C port ကိုသုံးထားတာကွောငျ့ Nintendo Switch ဒါမှမဟုတျ iPhone X တဈလုံးကို အလငျြအမွနျ အားသှငျးနိုငျပါတယျ။ ဒီဘကျထရီနဲ့ iPhone X ကို ၈ ကွိမျ အားသှငျးနိုငျပါတယျ။ ၁၂ လကျမ MacBook ကိုတော့ နှဈကွိမျ အားသှငျးနိုငျပွီး ၁၃ လကျမ MacBook Pro ကိုတော့ တဈကွိမျအားသှငျးနိုငျပါတယျ။
တနျဖိုး – ဒျေါလာ ၁၀၀
အားသာခကျြ – အလှယျတကူ သယျဆောငျသှားနိုငျ
အားနညျးခကျြ – အနကျရောငျနဲ့သာ ရရှိနိုငျ
Nintendo Switch ဟာ အားသှငျးဖို့အတှကျ 15V/2.6A လိုအပျတာကွောငျ့ Anker PowerCore Speed 20000 PD က Switch အတှကျ အသငျ့တျောဆုံး ဘကျထရီဖွဈပါတယျ။
ဒီဘကျထရီရဲ့ အထူက တဈလကျမသာရှိပွီး အလေးခြိနျက ၁၃ အောငျစ ဖွဈပါတယျ။ ဘကျထရီရဲ့ပမာဏက 20,100mAh ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ စမတျဖုနျးကို ငါးကွိမျ၊ USB-C laptop ကို တဈကွိမျနဲ့ tablet ကို နှဈကွိမျ အားပွနျသှငျးနိုငျတဲ့ပမာဏ ဖွဈပါတယျ။
တနျဖိုး – ၅၂ ဒျေါလာ
အားသာခကျြ – ရစေိုဒဏျ၊ အကွမျးဒဏျခံနိုငျ
အားနညျးခကျြ – ဘကျထရီပမာဏ ၁၀,၀၀၀ သာပါဝငျ
LifeProof ရဲ့ ဒီ external battery pack ဟာ ရစေိုဒဏျခံနိုငျသလို ပွုတျကတြဲ့ဒဏျနဲ့ ညဈပတျပရေတေဲ့ဒဏျတှကေိုလညျး ခံနိုငျရညျရှိပါတယျ။ ရအေနကျ ၂ မီတာမှာ တဈနာရီကွာ စိမျထားနိုငျပွီး ၆ လကျမအထူရှိတဲ့ နှငျးထုထဲ ပွုတျကတြဲ့ဒဏျကိုလညျး ခံနိုငျပါတယျ။
ဘကျထရီရဲ့ပမာဏက 10,000mAh ဖွဈပါတယျ။ ဒီဘကျထရီနဲ့ စမတျဖုနျးကို လေးကွိမျ၊ tablet ကို တဈကွိမျ အားသှငျးနိုငျပါတယျ။
Previous PostSMEs CLMVT Genius Exporter 2018 သင်တန်းအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
Next Postရေစိုခံ FM Bluetooth Speaker RB-M21